Samee ugu xilli qabow adigoo booqanaya ku Feestooyinka Best Winter in Europe. ciidaha ayaa ku lug wax walba oo ka barafka iyo snowboarding si ay u music, Majaajilo, farshaxan baraf, iyo maraan damaashaad sitaa. Hoos waxaa ku qoran waa top 5 Gogoldhiga waxa aad doonaa helayo dhacaya guud ahaan Yurub ee January iyo February.
Firkradahaan bilowdo Feestooyinka Jiilaalka ee Europe, iyo off tagno Scotland
Edinburgh Hogmanay waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Dabaaldegyada New sano dunida ee, mar nigis dhab ah duurjoogta ah iyo wooly. Hogmanay waa eraygii Scottish waayo, Sanadka Cusub ee Eve oo iid Hogmanay Edinburgh ee waxa uu noqday mid ka mid ah ugu weyn dabaal sanadka cusub ee dunida. Edinburgh ee Hogmanay waa damaashaad 3-maalin full of dhacdooyinkii in ka mid ah israac ah torchlight, riwaayada music live, dhacdooyinka qoyska, Koox wadada weyn, cayaar dhaqameed, rashka, iyo xataa dhoolatus costumed in dhammaanaysaa a maquufin qabow webiga!
London Hyde Park Winter Ihmemaa laabtay Hyde Park ee 2018 iyadoo ay dhib barafka la dhalaalayay, suuqa Christmas weyn iyo raacid xiiso-buuxiyey. Hubi in aad qaadato lacag caddaan ah iyo imaan hore si looga fogaado in ay seegeen raacid la yaab leh in iibin karaa si degdeg ah! Winter Ihmemaa waa aadka loo jecel yahay, oo aan ku qorin yaabaa Feestooyinka our Best Winter ee Europe oo aan xusay!
Shidida ilaa maalmihii madoobaa iyo habeen ah Luxembourg City waa Winterlights Luxembourg. Oo ka mid ah hawlaha badan iyo dhacdooyin on dalab qoyska oo dhan, ah suuqyada Christmas sii jecel adag! Waxaad filan kartaa alaabta handmade, dharka, alaabta lagu ciyaaro, accessories iyo dabcan (aannu u jecel) waxbadan cuntada delicious kaliya sugayaan in la dhadhamiyey! From dhaqanka ah “Kichelchen baradho” si ay dhadhan dheeraad ah qalaad ka dalal fog-Turray, waxaa ku xidhan tahay in ay qof walba wax u.
The best way to experience this pick of Winter Festivals in Europe is to visit the water exhibition is doon. Shirkadaha safar Canal bixiyaan doonyaha gaarka ah hanuuniyey weheliyaan farshaxanka ah. The Amsterdam Light Festival Cruise qaadataa 75 daqiiqo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/winter-festivals-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#ciidaha #winterfestival #Winterfestivals europetravel longtrainjourneys talooyin tareenka tareen safarka travelamsterdam Winter Winterholiday